Mystic pop-up Bar 쌍갑포차 (2020) အဖနျငါးရာငါးကမ်ဘာကိုယုံလား? | News Bar Myanmar
Mystic pop-up Bar 쌍갑포차 (2020) အဖနျငါးရာငါးကမ်ဘာကိုယုံလား?
ဒီလ20ရကျနေ့ Netflixမှာစပွီးလှှငျ့ခဲ့တဲ့ Mystic Pop-up Bar ဆိုတဲ့ Korean Comedy-Action Series လေးကလကျရှိ Youtube နဲ့ Netflix မှာpopularဖွစျနတေဲ့seriesလေးဖွစျပါတယျ။ (She Was Pretty)(Kill Me:Heal Me)စတဲ့တခွားဇာတျကားတှအေမြားကွီးနဲ့ကြောျကွားတဲ့ မငျးသမီး Hwang Jung Eum နဲ့ (Goblin)ထဲမှာ ယူဒေါ့ဟှာဆိုပွီး လူသိမြားခဲ့တဲ့ မငျးသား Yook Sung Jae တို့ကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။ မနဲ့မောငျပေါ့ 🤪 လကျရှိမှာ Ep 1&2 နှစျပိုငျးထှကျရှိထားပွီး ဗုဒ်ဓဟူးနဲ့ကွာသပတေးနေ့တှတေိုငျး Epအသစျတှထှေကျဖို့ရှိပါတယျ။ S1မှာတော့ Ep 12 ပိုငျးပါရှိမှာပါ။
ကောငျမလေးတစျယောကျဟာသူပွုတဲ့ကောငျးမှုတစျခုကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ကွိုးဆှဲခသြခေဲ့တယျ။ သူကွိုးဆှဲခတြဲ့သစျပငျက တိုငျးပွညျရဲ့အကာအကှယျ လာဘျကောငျးစတေဲ့သစျပငျ လူတှဆေုတောငျးမှုပွုကွတဲ့သစျပငျပေါ့။
အဲ့တာနဲ့ သူကွောငျ့အဲ့သစျပငျကပကြျစီး တိုငျးပွညျလညျးစစျဖွစျပွီး လူ 100,000 သခေဲ့ရတယျ။ သူသလေို့ငရဲရောကျတော့(ကြှနျတောျတို့အဖနျ၅ရာ၅ကမ်ဘာလို့ ဆိုရိုးရှိသလိုမြိုး)သူလဲ နှစျ500 အပွစျခံရတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ကွောငျ့လူ 100,000 သခေဲ့ရတာမို့ အပွစျပိုပေးတဲ့အနနေဲ့ လူ့ကမ်ဘာပွနျလှှတျ (spiritဆိုတော့ suprpowerလဲရှိတယျ) သူအပွစျခံရတဲ့နှစျ 500 အတှငျး sucideလုပျလို့မအောငျမွငျလိုကျတဲ့လူ 100,000 ရဲ့ဒုက်ခတှကေိုဖွရှေငျး​ပေးဖို့စခေိုငျးခံရတယျ။ အသကျဆကျရှငျနိုငျအောငျပေါ့။
ကယျနိုငျရငျ heaven ၊ မအောငျမွငျရငျ go to the hell ပဲ။ ထပျပွီး ကိုတှလေူ့ကမ်ဘာမှာလဲ Superpower ရှိတဲ့ လူသားတှရှေိပွီး Spiritတှကေ သူတို့ကို သံလိုကျ(Magnet)လို့ခေါျတယျ။ Magnet တှကေ Spirit တှကေို အရငျဘဝ(After Life)ကိုပွနျပို့ပေးနိုငျတယျ တံတားလိုပေါ့။ Magnet တှကေ spiritတှေ အတှကျသိပျအရေးပါတယျ။
“Mystic Pop-up Bar”လေးကနာမညျကွီး Webtoon တစျခုအပေါျအခွခေံပွီး ရိုကျကူးထားတာဖွစျပွီး ညအခြိနျခေါငျမိုးထပျမှာထူးခွားဆနျးကွယျစှာပေါျလာတဲ့ ဘားလှညျးလေးက မတူညီတဲ့ ကမ်ဘာသုံးခု ကိုလှညျ့လညျသှားလာနိုငျတာမို့ စိတျဝငျစားစရာ Seriesလေးတစျခုအဖွစျရှိနပေါတယျ။
Next ပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့ 'Powerful Leadership Quality' စာရင်းမှာ Rap Monster ထိပ်ဆုံးကရပ်တည် »
Previous « Jungkook ရဲ့ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုတံဆိပ်ကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ ပြည်သူတွေလက်မှတ်ရေးထိုးဆန္ဒပြနေကြ